လမ်းခုလတ်က တို့ရွာကလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » လမ်းခုလတ်က တို့ရွာကလေး	20
Posted by manawphyulay on Apr 30, 2015 in Poetry | 20 comments
ရင်မှ ကြိုဆို လှိုက်လှဲစွာဖြင့်
စုန်ဆန် ဖြူမည်း၊ မူမခွဲဘဲ
လိုရာစခန်း သင် ဆက်လှမ်းပေါ့
အောင် မိုးသူ says: ဂဇက်ရွာကလေးပေါ့။ လမ်းခုလတ်က ဂဇက်ရွာကလေးပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinsett @ Maung Thura says: စာပေ အရေးအသား
အပြုံး မပျက်ဘူး.. ဟက်လား…
ကျနော့်ကိုတော့ .. လူကြားထဲတောင်…မအောင့်နိုင်ပဲ ရိ ရွဲ့ စောင်း မြောင်း ပြိး..သတ်ပစ်တော့မလောက် မုန်းနေတဲ့သူ ရှိတယ်ဗျ…
မယုံ မရှိနဲ့… ကိုယ်တွေ့..ကိုယ်တွေ့… ဟေဟေ့…
ခင်ဇော် says: ဟေဟေဟေ့။
Alinsett @ Maung Thura says: ဟာ…. ဒါရှို… အဖြစ်ရယ်မှတူလိုက်လေခြင်းးးးးးပေါ့နှော်…
အဲ့နောက်ပိုင်း….တချို့လူတွေက သိပ် ကြောက်ဖုတ်ကောင်းတာပဲ…လို့…
အဲလေ… သိပ်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတာပဲလို့…တွေးမိ… အဟီဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4021
manawphyulay says: အိုကွယ်… ဒါကတော့ ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်ကြောင်း သိအောင် ဆန်းစစ်တာနေမှာပေါ့နော်.. :P
manawphyulay says: ဒီလိုပြောကြေးဆို ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ဒီထက် ဒီထက် ပိုပြီး ဆိုးသေးပါကြောင်း….
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မိခင်လောင်းရဲ့ စိတ်ဟာ အလှဆုံးတဲ့။ စိတ်အလှဆုံးအချိန်မှာ ရေးလိုက်တဲ့ အလှဆုံးကဗျာလေး။
manawphyulay says: ကျေးဇူးပါ မမပိုး… မပိုးကော နေကောင်းပါရဲ့လား… သတိရနေပါတယ်နော်…
မြစပဲရိုး says: Many Congratulations မနောရေ။
ကျန်းမာရေး ကို အထူးဂရုစိုက်၊ အစား မှန်မှန် စား၊ အပူ အစပ်ရှောင်၊ အသွားအလာ သတိထား၊
စိတ် ကို ပျော်အောင်ထား၊ စိတ်ရှုပ် စရာ တွေ ခေါင်းထဲ မထည့်နဲ့။
kai says: အခုလာမယ့် ၂ရက်နေ့မှာ.. ပွဲတပွဲလုပ်ထားတယ်..။
ဆိုတော့… ဒီနေ့မနက်မှာ.. မြန်မာ့ဂဇက်နာမယ် ခရက်ဒစ်တပ်ပြီး.. မစ်ရှဲရိုးက.. ပြင်သစ်ပြည်ပါရီမြို့ကနေ.. ဗီဒီယိုသတင်းလေးပို့တယ်…။
စုဖောင်ဒေးရှင်းကို.. သေသေချာချာဆက်အာရုံစိုက်သွားရင်.. နောက်နှစ်မှာ.. ဒေါ်စုကို ဒီလိုပွဲမျိုး တက်ပါလို့… ဖိတ်နိုင်မယ်.. ထင်မိတာပဲ…။
သူလာမယ်ဆို.. ယူအက်စ်က အမေရိကန်ထဲ.. ဖိတ်ရမယ့်သူက.. ဟီလာရီကလင်တန်ပေါ့..။
၂၀၁၆အတွက်.. အသည်းအသန်.. မဲဆွယ်နေရပြီလေ..။
နောက်.. အဆင်ပြေရင်.. နောက်နှစ်ဒီအချိန်မှာ.. မြန်မာသမ္မတဖြစ်နေမယ့်သူကိုလည်း.. ဖိတ်မယ်… မှန်းတာပဲ..။ ဘယ်သူလို့.. ထင်သလည်း.. ?
လမ်းခုလတ်က.. ရွာကလေး.. ဧည့်သည်ကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့… မဆိုးလောက်နေပြီ.. ထင်ရဲ့…။
Alinsett @ Maung Thura says: စကား ဇွတ်ကြီးစပ်. . .
ကျုပ်လေးကလည်း မြန်မာပြည်တွင်းက နာမည်ကြီး ဒိတ်ဒိတ်ကြဲစာရေးဆရာတွေကို
ဂဇက် သတင်းစာမှသည်. . .ရွာထဲ လာဖို့ ဖိတ်ထားပါသဗျ။
ဂျူးအန်တီတို့ ဆရာ အော်ပီကျယ် သစ္စာနီတို့ကအစ. . .
ဆိုတော့ သူတို့တတွေက မန်ဘာတွေဝင် စာတွေဝင်ရေးလောက်အောင်
အားလပ်သူတွေ မဟုတ်လေတော့. . . အားတဲ့အချိန်မှာ ဝင်နေ ဖတ်နေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါရဲ့
ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီ ရွာ ဒီရွာသူားတွေဟာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေရဲ့ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ခံယူထိုက်သူတွေလည်း
naywoon ni says: ကဗျာက ဧည့်​သည်​​တွေအ​ကြောင်းပဲပါတာ အမြဲ​နေကြမဲ့ ရွာသား​တွေအ​ကြောင်းမပါ​သေးဘူး အဲ့​တော့ ​နောက်​ထပ်​တစ်​ပုဒ်​​လောက်​ !
Mike says: .ကဗျာလေးကတယ်ကောင်းပါလား…ချီးကျူးပါတယ်
kai says: ဒီ၂ခုရလာ… =
မြစပဲရိုး says: Many Congratulations MG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-))))))))
We are so proud of you. And ME asamember of Myanmar Gazette. (sorry I corrected it) :-))
Ma Ma says: ခုမှတွေ့လို့ ခုမှပဲ ရေးရတယ်။
Bravo!!!!!!!!!!!!! Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ကွန်မန့်ပြီးလို့ ပြန်ဖတ်တော့ ရလာတဲ့ ဒီ၂ခု မတွေ့ရတော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ရှိပါတယ်အမတော်ရဲ့…
padonmar says: .အောက်ပုံက သတင်းစာအတွက်ပေါ့၊
.အပေါ်ပုံက Website အတွက်လား သူကြီး။
.ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Congratulations သူကြီး
uncle gyi says: ကိုနီရေအိမ်သည်ကိုမြုပ်ပြီးရေးထားတာပါ